Maamulka Puntland oo joojiyey kulan dhexmarilahaa Madaxweyne farmaajo iyo. – Kismaayo24 News Agency
Maamulka Puntland oo joojiyey kulan dhexmarilahaa Madaxweyne farmaajo iyo.
by admin 7th May 2019 066
Wararka ka imaanaya magaalada Garawe ee xarunta maamulka Puntlanad ayaa sheegaya in xalay la joojiyay kulan la qorsheeyay in Madaxweyne Farmaajo kala qeyb galo bulshada Rayidka ee Puntlanad.
Kulanka Madaxweyne Farmaajo kaga qeyb gali lahaa magaalada Garawe ayaa loogu magac daray ”Kulan Dadweyne iyo Madaxweyne Farmaajo” waxaana kulanka Madaxweynaha lagu weydin lahaa su’aalo la xariira Hanaanka doorasho ee dalka iyo doorka bulshada rayidka.
Maamulka Puntlanad amar kasoo baxay ayaa la sheegay in kulankan oo lagu qaban lahaa Hotelka kuyaala Garawe lagu joojiyay, waxaana mar qura arintaasi fajiciso ku noqotay dad badan oo isku diyaariyay ka qeyb galka kulankaasi.
Sida aan Wararka ku heleyno Puntlanad ayaa ka biyo diiday in kulan dhax maro Madaxda dowlada iyo Pulshada rayidka ilaa lagu heshiinayo shirka Garawe ka socda, waxa ayna Puntland kasoo horjeedaa in hadalo xiisad abuuri kara kasoo baxaan kulamada dadweyne.
Mareykanka oo digniintii ugu denbeeyay siiyay dalka Turkiga.
NIISA oo soo bandhigtey Saraakiil ka soo baxsatey.
Kooxo Hubeysan oo Goordhaw Dil ka Geesatay Isgooyska Sanca ee Magaallada Muqdisho
admin 31st July 2018
Dowlada Kenya oo ciidamo degaanka ah dhigtay Sohdinta ay la wadaagto Somaliya
Sakariye Sakariye 20th February 2018
Shirkii gaashaanbuurta NATO uga socda duleedka London oo lasoo gabo-gabeeyay